အမာရှတျအမြိုးမြိုးကို သဘာဝနညျးနဲ့ လငျြလငျြမွနျမွနျ ဖယျရှားနိုငျမယျ့ နညျးလမျး (၁၀) ခု – One Daily Media
Health • Knowledge
အမာရှတျအမြိုးမြိုးကို သဘာဝနညျးနဲ့ လငျြလငျြမွနျမွနျ ဖယျရှားနိုငျမယျ့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
ခန်ဓာကိုယျမှာ၊ မကျြနှာပျေါမှာ အမာရှတျတှေ ရှိနရေငျ အဝတျအစား ဝတျရတာ တျောတျော ခကျခဲပါတယျ။ အခြိနျပေးနိုငျပွီး စိတျရှညျရှညျ စောငျ့နိုငျရငျ အမာရှတျတှကေို သဘာဝ နညျးအတိုငျး ဖယျရှားလို့ ရပါတယျ
လလေ့ာခကျြတှေ အရ မကျြနှာပျေါက အမာရှတျတှေ အတှကျ Vaseline က တနျဖိုးကွီး cream တှထေကျ ပိုပွီး ထိရောကျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ Vaseline ကို တဈနေ့3ကွိမျခနျ့ လိမျးပေးရငျ3ပတျ အကွာမှာ ထူးခွားလာ မှာပါ။ Vaseline က အသားအရကေို ရဓောတျလညျး ဖွညျ့ပေးပါတယျ။ ရကြေောကျ၊ ဝကျခွံ အမာရှတျ၊ ထိမိခွဈမိတဲ့ အမာရှတျတှေ အတှကျ Vaseline က အကောငျးဆုံး ပါပဲ။
9. ရှားစောငျးလကျပတျ ဂယျြလျ
အသားအရေ အတှကျ ရှားစောငျးလကျပတျကို အသုံးပွုခဲ့တာ နှဈပေါငျး မနညျးတော့ ပါဘူး။ ရှားစောငျးလကျပတျ ဂယျြလျက အရပွေား ဆဲလျတှကေို ပွုပွငျပေး ပါတယျ။ အမာရှတျ ရှိတဲ့ နရောမှာ ရှားစောငျးလကျပတျ ဂယျြလျကို လိမျးပေးပွီး မိနဈ 30 ခနျ့ ထားရမှာပါ။ တဈနကေို့ နှဈကွိမျခနျ့ ပွုလုပျပေးလို့ ရပါတယျ။ ခှဲစိပျမှုကွောငျ့ ကနျြခဲ့တဲ့ အမာရှတျတှေ အတှကျ ရှားစောငျး လကျပတျက သငျ့တျောပါတယျ။
ထိခိုကျဒဏျရာ၊ မီးလောငျဒဏျရာတို့ဖွဈတဲ့အခါ ကနျြခဲ့တဲ့အမာရှတျအတှကျ အနာကပျပလာစတာနဲ့ ဆီလီကှနျဂယျြလျတို့ကို အသုံးပွုနိုငျ ပါတယျ။ဆီလီကှနျက အသားအရကေို ရဓောတျဖွညျ့ပေးပွီး အမာရှတျတှကေို ဘကျတီးရီးယားတှကေို ဝငျရောကျမှုကနလေညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
7. ရနံ့ဆီ(စန်ဒကူးဆီနှငျ့ လာဗငျဒါဆီ)
စန်ဒကူးဆီနဲ့ လာဗငျဒါဆီက အနာကကျြစပွေီး ဆဲလျတှကေို ပွနျလညျ ရှငျသနျစပေါတယျ။ အမာရှတျရှိတဲ့နရော အထူးသဖွငျ့ ဝကျခွံအမာရှတျနရောမှာ ရနံ့ဆီကို လိမျးပေးလို့ရပါတယျ။
အမာရှတျရှိတဲ့နရောကို lotionလိမျးပေးပွီး နှိပျနယျပေးခွငျး ကလညျး ထိရောကျတဲ့ နညျးပါပဲ ။ တဈရကျကို 30 စက်ကနျ့လောကျ လိမျးပေးခွငျးက မကောငျးတဲ့ ဆဲလျတှကေို ဖယျရှားပွီးသား ဖွဈစပေါတယျ။ ခှဲစိပျပွီးနောကျ ကနျြခဲ့တဲ့ အမာရှတျတှေ အတှကျလညျး ဒီနညျးကို သုံးနိုငျ ပါတယျ။
5. နလေောငျခံ လိမျးဆေး
ခန်ဓာကိုယျမှာ အနာတဈခုခု ရှိရငျလညျး နပေူခံလို့ မဖွဈပါဘူး။ နရေောငျခွညျမှာ ပါဝငျတဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျက အမညျးစကျတှကေို ဖွဈစေ ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ SPF 15 နဲ့ အထကျပါဝငျတဲ့ နလေောငျခံ လိမျးဆေးတှကေို အမာရှတျပျေါမှာ လိမျးပေးသငျ့ ပါတယျ။
ကွကျသှနျနီနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ဂယျြလျကို အရပွေားရောငျရမျး၊ ဘကျတီးရီးယား ဝငျရောကျတာတှအေတှကျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ကွကျသှနျနီဂယျြလျက အမာရှတျတဈရှူးတှကေို ဘေးထှကျဆိုးကြိုး မရှိစဘေဲ ဖယျရှားပေးပါတယျ။ တဈနကေို့3ကွိမျခနျ့ လိမျးပေးလို့ ရပါတယျ။
3. ပနျးသီးရှာလကာရညျနှငျ့ ပြားရညျ
ပနျးသီးရှာလကာရညျက အမာရှတျတှကေို လုံးဝ ပြောကျကငျးစမှောတော့ မဟုတျပါဘူး။ ပနျးသီးရှာလကာရညျနဲ့ ပြားရညျကိုရောပွီး အမာရှတျပျေါ လိမျးပေးရငျ တဖွညျးဖွညျး ထူးခွားလာပါတယျ။
2. သံလှငျဆီနှငျ့ အုနျးဆီ
အုနျးဆီက ကျောလဂငျြ ထုတျလုပျမှုကို လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။ သံလှငျဆီက ဗီတာမငျ ပါဝငျတာကွောငျ့ အနာမွနျမွနျ ကကျြစပေါတယျ။ အသားအရကေိုလညျး ရဓောတျနဲ့ အာဟာရဓာတျ ဖွညျ့ပေးပါတယျ။ သံလှငျဆီနဲ့ အုနျးဆီကို တဈနကေို့ 10 မိနဈခနျ့ အခြိနျပေးပွီး လိမျးပေးရငျ အမာရှတျတှေ တဖွညျးဖွညျးပြောကျသှားမှာပါ။
1. ဗီတာမငျ C
ဗီတာမငျ C ကို အမာရှတျတှေ အတှကျ အသငျ့တျောဆုံး ပါပဲ။ ကျောလဂငျြ ထုတျလုပျမှု တိုးတကျလာစဖေို့အတှကျ အသားအရကေ ဗီတာမငျ C လိုအပျပါတယျ။ ဗီတာမငျ C ကို လိမျးဖို့ အတှကျရော၊ သောကျဖို့အတှကျပါ ဆရာဝနျတှကေ အကွံပွုထားပါတယျ။
အမာရှတျတှေ ကွာကွာ မကနျြစဖေို့အတှကျ အနာဖွဈပွီဆိုရငျ
– အနာကို သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး ထားပွီး ရဓောတျဖွညျ့ပေးတဲ့၊ ဆီပါဝငျတဲ့ လိမျးဆေးတဈခုခုကို လိမျးပါ။
– အနာကို ပတျတီးနဲ့ ပတျထားပါ။
– အနာကို နရေောငျ အထိမခံဘဲ နပေူခံလိမျးဆေးကို လိမျးပေးပါ။
– အနာကို မှနျကနျတဲ့ ကုသမှုတှကေ လှဲပွီး တခွား ကုသမှုတှေ မပွုလုပျသငျ့ပါဘူး။
– အနာမကကျြခငျ အနာဖေးကို မခှာသငျ့ပါဘူး။
– လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျလို့ ရပါတယျ။
– အနာကကျြအောငျ စိတျရှညျရှညျစောငျ့ပါ။
အမာရွတ်အမျိုးမျိုးကို သဘာဝနည်းနဲ့ လျင်လျင်မြန်မြန် ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀) ခု
ခန္ဓာကိုယ်မှာ၊ မျက်နှာပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေ ရှိနေရင် အဝတ်အစား ဝတ်ရတာ တော်တော် ခက်ခဲပါတယ်။ အချိန်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်ရှည်ရှည် စောင့်နိုင်ရင် အမာရွတ်တွေကို သဘာဝ နည်းအတိုင်း ဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်
လေ့လာချက်တွေ အရ မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်တွေ အတွက် Vaseline က တန်ဖိုးကြီး cream တွေထက် ပိုပြီး ထိရောက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Vaseline ကို တစ်နေ့3ကြိမ်ခန့် လိမ်းပေးရင်3ပတ် အကြာမှာ ထူးခြားလာ မှာပါ။ Vaseline က အသားအရေကို ရေဓာတ်လည်း ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ရေကျောက်၊ ဝက်ခြံ အမာရွတ်၊ ထိမိခြစ်မိတဲ့ အမာရွတ်တွေ အတွက် Vaseline က အကောင်းဆုံး ပါပဲ။
9. ရှားစောင်းလက်ပတ် ဂျယ်လ်
အသားအရေ အတွက် ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို အသုံးပြုခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ ပါဘူး။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ဂျယ်လ်က အရေပြား ဆဲလ်တွေကို ပြုပြင်ပေး ပါတယ်။ အမာရွတ် ရှိတဲ့ နေရာမှာ ရှားစောင်းလက်ပတ် ဂျယ်လ်ကို လိမ်းပေးပြီး မိနစ် 30 ခန့် ထားရမှာပါ။ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ခွဲစိပ်မှုကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေ အတွက် ရှားစောင်း လက်ပတ်က သင့်တော်ပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာတို့ဖြစ်တဲ့အခါ ကျန်ခဲ့တဲ့အမာရွတ်အတွက် အနာကပ်ပလာစတာနဲ့ ဆီလီကွန်ဂျယ်လ်တို့ကို အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ဆီလီကွန်က အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး အမာရွတ်တွေကို ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဝင်ရောက်မှုကနေလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
7. ရနံ့ဆီ(စန္ဒကူးဆီနှင့် လာဗင်ဒါဆီ)
စန္ဒကူးဆီနဲ့ လာဗင်ဒါဆီက အနာကျက်စေပြီး ဆဲလ်တွေကို ပြန်လည် ရှင်သန်စေပါတယ်။ အမာရွတ်ရှိတဲ့နေရာ အထူးသဖြင့် ဝက်ခြံအမာရွတ်နေရာမှာ ရနံ့ဆီကို လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
အမာရွတ်ရှိတဲ့နေရာကို lotionလိမ်းပေးပြီး နှိပ်နယ်ပေးခြင်း ကလည်း ထိရောက်တဲ့ နည်းပါပဲ ။ တစ်ရက်ကို 30 စက္ကန့်လောက် လိမ်းပေးခြင်းက မကောင်းတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။ ခွဲစိပ်ပြီးနောက် ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေ အတွက်လည်း ဒီနည်းကို သုံးနိုင် ပါတယ်။
5. နေလောင်ခံ လိမ်းဆေး
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနာတစ်ခုခု ရှိရင်လည်း နေပူခံလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ နေရောင်ခြည်မှာ ပါဝင်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်က အမည်းစက်တွေကို ဖြစ်စေ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် SPF 15 နဲ့ အထက်ပါဝင်တဲ့ နေလောင်ခံ လိမ်းဆေးတွေကို အမာရွတ်ပေါ်မှာ လိမ်းပေးသင့် ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဂျယ်လ်ကို အရေပြားရောင်ရမ်း၊ ဘက်တီးရီးယား ဝင်ရောက်တာတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီဂျယ်လ်က အမာရွတ်တစ်ရှူးတွေကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိစေဘဲ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ တစ်နေ့ကို3ကြိမ်ခန့် လိမ်းပေးလို့ ရပါတယ်။
3. ပန်းသီးရှာလကာရည်နှင့် ပျားရည်
ပန်းသီးရှာလကာရည်က အမာရွတ်တွေကို လုံးဝ ပျောက်ကင်းစေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းသီးရှာလကာရည်နဲ့ ပျားရည်ကိုရောပြီး အမာရွတ်ပေါ် လိမ်းပေးရင် တဖြည်းဖြည်း ထူးခြားလာပါတယ်။
2. သံလွင်ဆီနှင့် အုန်းဆီ
အုန်းဆီက ကော်လဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ သံလွင်ဆီက ဗီတာမင် ပါဝင်တာကြောင့် အနာမြန်မြန် ကျက်စေပါတယ်။ အသားအရေကိုလည်း ရေဓာတ်နဲ့ အာဟာရဓာတ် ဖြည့်ပေးပါတယ်။ သံလွင်ဆီနဲ့ အုန်းဆီကို တစ်နေ့ကို 10 မိနစ်ခန့် အချိန်ပေးပြီး လိမ်းပေးရင် အမာရွတ်တွေ တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားမှာပါ။
1. ဗီတာမင် C
ဗီတာမင် C ကို အမာရွတ်တွေ အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ပါပဲ။ ကော်လဂျင် ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် အသားအရေက ဗီတာမင် C လိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် C ကို လိမ်းဖို့ အတွက်ရော၊ သောက်ဖို့အတွက်ပါ ဆရာဝန်တွေက အကြံပြုထားပါတယ်။
အမာရွတ်တွေ ကြာကြာ မကျန်စေဖို့အတွက် အနာဖြစ်ပြီဆိုရင်
– အနာကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထားပြီး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့၊ ဆီပါဝင်တဲ့ လိမ်းဆေးတစ်ခုခုကို လိမ်းပါ။
– အနာကို ပတ်တီးနဲ့ ပတ်ထားပါ။
– အနာကို နေရောင် အထိမခံဘဲ နေပူခံလိမ်းဆေးကို လိမ်းပေးပါ။
– အနာကို မှန်ကန်တဲ့ ကုသမှုတွေက လွဲပြီး တခြား ကုသမှုတွေ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
– အနာမကျက်ခင် အနာဖေးကို မခွာသင့်ပါဘူး။
– လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။
– အနာကျက်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ပါ။
စကားကွီး (၃) ခှနျး
မကျြလှညျ့ဆရာ အဘိုးအိုက မွေးမလေးကို ပေးတဲ့သငျခနျးစာ
ရုပျရညျမလှလညျး တနျဖိုးရှိတဲ့ မိနျးကလေးဆိုတာ
ယုံစားလှယျတဲ့ မိနျးကလေးမြား ဖတျထားသငျ့သော ပုံပွငျ
လောကကွီးမှာ မညျသညျ့အရာမှ အလကားမရပါ